Android သည်စီးပွားရေးဈေးကွက်၏ ၂၆% သာရှိသည် Androidsis
Cristina Torres နေရာချထားပုံ | | လဲ tutorial
မိုဘိုင်းလောကတွင် segment ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် iOS ကို Android နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်၎င်းတို့သည်အများစုလည်ပတ်ရေးစနစ်များဖြစ်ပြီးအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့သည်စာရင်းအင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေသောတိုင်းပြည်အပေါ်သာမကစျေးကွက်နှင့်အချို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏လွှမ်းမိုးမှုအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ Android သည်ပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုသူများကို ဦး ဆောင်သော်လည်းစီးပွားရေးဖောက်သည်များအနေဖြင့် Apple သည်ဆက်လက် ဦး ဆောင်နေပုံရသည် iPhone အကွာအဝေးကိုရွေးချယ်ခြင်း ရရှိနိုင်အများအပြား Android ရွေးချယ်စရာနှိုင်းယှဉ်။
El နောက်ဆုံးပေါ်လေ့လာမှုကိုပြသသည့်နောက်ဆုံးပေါ်လေ့လာမှု ကုမ္ပဏီများရှိမိုဘိုင်းလ်လည်ပတ်မှုစနစ်များကိုရည်ညွှန်းခြင်း၊ စျေးကွက်၏အပိုင်းအစများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မေလတွင် Mobility Index Report အဖြစ်လူသိများသည်။ ထို့နောက်ကောက်ချက်၏ပထမ ဦး ဆုံးမှာ Apple သည်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်များ Android စနစ်သည်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၂၆% အထိတိုးမြှင့်ပြီးဒုတိယနေရာတွင်ရပ်တည်နေပြီးကျန် operating system များမှာမူအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
တကယ်တော့တိုက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်ပါဘူး Apple သည်ဈေးကွက်တွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည် ထို့အပြင် Android ကို Cupertino ကိုရှင်းလင်းသောခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဒုတိယနေရာတွင်သတ်မှတ်ထားသည်။ အမှန်တရားမှာ Apple ကုမ္ပဏီသည် IBM ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးလောကအတွက်အထူးဆော့ဝဲလ်ဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်ဆိပ်ကမ်းများပေးနိုင်ရန်သဘောတူညီမှုများရှိသည်။
Android ကိစ္စများတွင်ဤအမျိုးအစား၏နည်းဗျူဟာအချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းအချို့နိုင်ငံများနှင့် Apple မှပေးသောပမာဏထက်များစွာသေးငယ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများစွာရှိပြီးတစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းရှိသည်ဟူသောအချက်က Apple ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်သည့်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ စီးပွားရေးဖောက်သည်များ.
အက်ပဲလ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်မှာတက်ဘလက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိစ္စတွေကပိုကောင်းတယ်။ တကယ်တော့၊ ဒီမိုဘိုင်းကဏ္inမှာစားသုံးသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည် တက်ဘလက်များသည်ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်က ၈၁% တွင် Cupertino တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်၊ ယခုအချိန်တွင်တက်ဘလက်ကို ၀ ယ်ယူခဲ့သည့်စားသုံးသူကုမ္ပဏီအားလုံးမှသူတို့သည် iPad ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် ၀ င်းဒိုး (၁၀) နှင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုစနစ်နှင့်ပါလာသည့်လမ်းပေါ်တွင်ပိုမိုကြီးမားသောကွာဟမှုကိုရရှိရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင် Android သည်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအနည်းငယ်သောအားထုတ်မှုဖြင့်၎င်းသည်သူ၏နေရာကိုရှာမတွေ့သေးသော Redmon ကိုလက်လျှော့အရှုံးမပေးပါ။
ပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများနှင့်မိုဘိုင်းလောကတွင်ရွေးချယ်စရာများရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်တက်ဘလက်တွင် Android ကပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများစွာရှိပြီး၊ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်၎င်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်အပြုသဘောဆောင်သောတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများရှိသေးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုကပိုဆိုးလာတယ်၊ ဘက်ထရီတွေကိုထည့်ပြီးစတင်ဖို့အချိန်ကအမြဲတမ်းမရှိတော့ဘူး။ ဤအချက်၏အထောက်အထားမှာအဆိုပြုချက်အားလုံးရှိနေသော်လည်း ယခုအချိန်တွင်အက်ပဲလ်သည် ဆက်၍ ဘုရင်ဖြစ်နေသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android မိုဘိုင်းဈေးကွက်တွင် ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်
ငါကသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းပြောရရင်၊ ငါဟာလွယ်လွယ်ကူကူရှိတဲ့အိုင်ဖုန်းကိုသုံးခဲ့တယ်၊ အဲဒါကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲသုံးခဲ့တယ်၊ ပံ့ပိုးသူကိုင်တွယ်တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုတည်းအတွက်သာ Android ဖုန်းသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အမှန်တရားမှာ andoid တွင်အသုံးပြုရန်အာဇာနည်ဖြစ်ခြင်းကိစ္စအများစုမှာအချက်အလက်များကိုဖမ်းယူရန်နှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် iPhone ကိုရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲလုပ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သုံးသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုသာ android ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည် သူ့ရဲ့ဖောက်သည်အများစုမှာ android ရှိတယ်။ အိုင်ဖုန်းသုံးပြီးလွဲသွားရင်ဘာမှပြIနာမရှိဘူး။